Mpanamboatra sy mpamatsy milina famaohana i China - Puhua
Roller Conveyor Voatifitra Blasting Machine
Masinina fanapoahana tifitra karazana hook
Fitaovana fanapoahana basy
Trano fanamoriana fasika
Masinina miparitaka amin'ny lalana voatifitra
an-trano > Products > Milina fanapoahana tifitra > Masinina mihetsiketsika mitifitra fehikibo
Masinina mihetsiketsika mitifitra fehikibo
Milina fanapoahana karazana fitifirana
Crawler Voatifitra Blasting Machine
Trolley Type Shot vary main'ny rivotra
Tumb Belt Shot Blasting Machine Rubber track nitifitra milina fanapoahana tamina kalitao fanadiovana tsara, fohy ny fotoana, matevina, tabataba ambany, tombony tsara. Mihatra indrindra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana an-tsokosoko, fanadiovana, ampahany aluminium, faritra nohomboana, kodiarana sy loharanon'ny fasika, harafesina, fidinana ary fanamafisana ny tany, fa mihatra amin'ny karazana fitaovana enti-miasa rehetra koa. Indrindra fa noho ny tahotra ny mikasika ireo faritra, ny fanadiovana sy ny fanamafisana no azo ampiharina kokoa. Ny milina fanapoahana karazana Crawler-type ho an'ny ambaratonga famokarana samihafa, ny fampiasana azy irery, dia mety ho fampiasana maro. Ary ny mpanera mitohy, toy ny fanohanana ny famokarana tsipika fivoriambe fanadiovana, no fitaovana fanadiovana tsara indrindra ho an'ny fanadiovana lehibe sy salantsalany.
1.Fampidirana milina fanapoahana fehikibo
Tumb Belt Shot Blasting Machine Rubber track nitifitra milina fanapoahana tamina kalitao fanadiovana tsara, fohy ny fotoana, mifintina, mitabataba, ambany ny tombony. Mihatra indrindra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana an-tsokosoko, fanadiovana, ampahany aluminium, faritra nohomboana, kodiarana sy loharanon'ny fasika, harafesina, fidinana ary fanamafisana ny tany, fa mihatra amin'ny karazana fitaovana enti-miasa rehetra koa. Indrindra fa noho ny tahotra ny mikasika ireo faritra, ny fanadiovana sy ny fanamafisana no azo ampiharina kokoa. Ny milina fanapoahana karazana Crawler-type ho an'ny ambaratonga famokarana samihafa, ny fampiasana azy irery, dia mety ho fampiasana maro. Ary ny mpanera mitohy, toy ny fanohanana ny famokarana tsipika fivoriambe fanadiovana, no fitaovana fanadiovana tsara indrindra ho an'ny fanadiovana lehibe sy salantsalany.
2.Famaritana ny milina famaohana baomba mandondona:
Karazana F326 Q3210 QR3210
Famokarana (T / h) 0.6-1.2 3-5 1.5-2.5
Manisy lanja (kg) 200 800 600
Ny lanja farany ambony amin'ny sombin-javatra iray 10 30 30
Ny savaivon'ny roller (mm) Ï † 650 Ï † 1000 Ï † 1000
Fahafahana misy (m³) 0.15 0.4 0.3
Volavola manentana (kg / min) 125 360 250
Fihenan'ny habetsahan'ny rivotra (m³ / h) 2200 6000 5000
Fanaparitahana herinaratra (kw) 12.6 32.6 24.3
Dimension amin'ny endrika (mm) 3200 * 1520 * 3500 4290 * 1900 * 4500 5850 * 1950 * 4600
Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra karazana milina fanodinana fantsom-panafody rehetra tsy miankina amin'ny mpanjifa, araka ny fepetra takian'ny mpanjifa amin'ny antsipirihany, ny lanjany ary ny famokarany.
3.Details an'ny Tuck Belt Shot Blasting Machine:
Hanampy anao hahatakatra kokoa ireo sary ireo
4. Fanamarinana ny milina famaohana fehin-kibo mihetsiketsika:
Ny Qingdao Puhua Heavy Industrial Group dia naorina tamin'ny 2006, kapital voasoratra anarana maherin'ny 8.500.000 dolara, faritra manodidina ny 50.000 metatra toradroa.
Ny orinasanay dia nandalo mari-pahaizana CE, ISO. Vokatry ny milina fanapoahana fantsom-panafody avo lenta :, serivisy ho an'ny mpanjifa sy vidiny mifaninana, nahazo tambajotram-barotra eran-tany nahatratra firenena 90 mihoatra ny kontinanta dimy izahay.
1. Inona ny ora fanaterana?
20-40 andro fiasana, miorina amin'ny fepetra famokarana orinasa.
2. Ahoana ny fametrahana ny milina famafana Tuck Belt Shot :?
Manome serivisy any ampitan-dranomasina izahay, ny injeniera dia afaka mandeha amin'ny fametrahana sy famoahana deba amin'ny toeranao.
3. Inona ny akanjo milina habeny ho antsika?
Manamboatra milina manaraka ny fangatahanao izahay, mazàna miorina amin'ny haben'ny workpiece anao, ny lanjanao ary ny fahombiazany.
4. Ahoana no hifehezana ny kalitaon'ny Machine Tasting Belt Shot Blasting :?
Fiantohana herintaona, ary ekipa 10 QC hijerena ny ampahany rehetra manomboka amin'ny fanaovana sary mankany amin'ny masinina vita.
5. Inona ny ampahany amin'ny asa azo diovina amin'ny alàlan'ny milina fanapoahana Belt Shot :?
casting, forging faritra ary vy fananganana faritra ho an'ny fanadiovana kely viscous fasika, fasika atin'ny ary oksida hoditra. Izy io koa dia mety amin'ny fanadiovana ny tany sy ny fanamafisana ny faritra fitsaboana hafanana, indrindra amin'ny fanadiovana kely, ny rindrina manify izay tsy mety amin'ny fiantraikany.
6. Inona no karazana abrasive ampiasaina?
0.8-1.2 mm habe vy nitifitra vy
7. Ahoana ny fifehezany ny asa manontolo?
Fanaraha-maso PLC, fitaovana fampifandraisana azo antoka eo anelanelan'ny rafitra
â— † Raha misokatra ny varavarana fandinihana dia tsy hanomboka ny lohan'ny impeller.
â— † Raha misokatra ny fonony, dia tsy hanomboka ny lohan'ny impeller.
â— † Raha tsy mandeha ny lohan'ny mpametaka, dia tsy mandeha ny valves.
â— † Raha tsy mandeha ny mpampisaraka dia tsy mandeha ny ascenseur.
â— † Raha tsy mandeha ny ascenseur dia tsy mandeha ny mpanera visy.
â— † Raha tsy mandeha ny mpampita visy dia tsy mandeha ny valizy mitifitra.
â— † Rafitra fampitandremana lesoka amin'ny rafitra faribolana marokoroko, tonga ny lesoka rehetra, hijanona ho mandeha ho azy ny asa rehetra etsy ambony.
8. Inona ny hafainganana madio:
Azo namboarina, matetika 0,5-2,5 m / min
9. Kilasy madio inona?
Mamirapiratra vy Sa2.5
6. Ny serivisinay:
1.Mitazona antoka ny mīkini herintaona afa-tsy ny fahasimban'ny asa ratsy ataon'ny olombelona.
2.Manomeza sary fametrahana, sary famolavolana lavaka, boky torolàlana, boky torolàlana elektrika, boky fampianarana fikojakojana, sarin-tariby elektrika, mari-pankasitrahana ary lisitry ny fonosana.
3.We afaka mandeha any amin'ny orinasa misy anao hitarika fametrahana sy hampiofana ny entanao.
Raha liana amin'ny milina fanapoahana fehikibo ianao ,, tongasoa ianao hifandray aminay.
Hot Tags: Tumb Belt Shot Blasting Machine, Buy, Customized, Bulk, China, Cheap, Discount, Low Price, Buy Discount, Fashion, Newest, Quality, Advanced, Durable, Easy-Maintainable, Latest Selling, Manufacturer, Suppliers, Factory, in Stock, Sample maimaim-poana, marika, vitaina any Chine, vidiny, lisitry ny vidiny, teny nalaina, CE, Warranty herintaona
Coil Spring Shot vary main'ny rivotra
Belt Belt Rolling Type Shot Blasting Machine
Copyright © 2021 Qingdao Puhua Heavy Industrial Machinary Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.